Sannad-guurada 30aad ee Filimka Ururka "Waxaan helay masraxa weyn!" | Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward
Filimka "Waxaan helay masraxa weyn!" Waa filim 30 daqiiqo soconaya oo Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward ka shaqeeyeen si loo xuso sanad-guuradii XNUMX-aad ee aasaaskeedii.
Aktarada hogaamineysa waxaa lagu xushay baaritaanka shaqaalaynta furan.
Dad badan oo degan xaafada ayaa umuuqda kuwa siyaado ah, badankoodna waxaa lagu toogtay xaafada Ota.
Baadhitaanku waa nooc cusub oo filim ah oo qof walba uu si bilaash ah uga daawan karo tiyaatarada iyo internetka.
Agaasimuhu waa Daisuke Miki, oo ku guuleystey Grand Prix xaflado badan oo filimo ah sida TAMA NEW WAVE oo soo saarta in ka badan 100 xayeysiis oo internetka ah sanadkiiba.
Waxaa lagu dejiyay xarun dhaqameed dadweyne, waa majaajilo xiiso leh oo qosol iyo ilmo la socoto illaa naxdintii ugu dambeysay! !!
"Xatooyada masraxa! Waxaad tahay atariishada hogaamineysa!"
Hana Niwano, oo ka shaqeysa waqti dhiman dukaan lagu iibiyo dharka oo ujeedkeedu yahay inay noqoto atariisho, ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimid awoowe shaki badan, Kusaburo, oo aan lahayn rajo nololeed.
Kusaburo, oo doonaya inuu ka dhabeeyo riyadiisa ah inuu xaaskiisa marxuumka jiheeyo masraxa tiyaatarka, wuxuu isku dayayaa inuu la wareego marxaladan isagoo fiirinaya buugyaraha "Tiyaatarka Sanad guuradii 30aad" ee uu ku arkay goob dhaqameed u dhow. .
Cinwaanka masraxa waa "Nin Mucjiso ah". Waa shaqo caan ah oo salka ku haysa sheekada dhabta ah ee Helen Keller, oo ka adkaatay naafonimadii cusleyd ee "aan muuqan," "aan la maqli karin," iyo "aan la maqli karin," iyo Professor Sullivan, "mucjiso shaqaale" ah oo siisay iftiinkeeda.
Hana, oo hadda laga badiyay dhageysiga, iyo Himeko, oo ah shaqaale waqti dhiman ah, ayaa go'aansaday inay sharad ku yeeshaan kulankaan cajiibka ah.
Sidan oo kale, tababar gaar ah oo weyn oo awoowe ah ayaa bilaabay inuu noqdo atariisho masraxa.
Suurtagal ma tahay in lagu hafto masraxa?Muxuu yahay qorshaha la wareegida awoowe ee noloshiisa galaaftay? ??
Hana Niwano Waa gabar ku riyoota iney atirisho noqoto.Waa mid karti badan, laakiin markuu kacsan yahay, wuu hindhisaa.
Wuxuu ku dhashay Gobolka Nagasaki sanadkii 2000.Atariisho ahaan, waxay ku firfircoon tahay TV-ga, filimada iyo xayeysiimaha. Saddex filim ayaa soo bixi doona sanadka 2017.Muuqaallada waaweyn waxaa ka mid ah CX "TV xiiso badan Sukatto Japan", xayaysiisyada "Kirin", "SONY", "Ginza Color", iwm.
Himeko Yukitani Waa sarkaal sare oo ka tirsan Hana shaqadeeda waqti dhiman.Waxaan higsanayay inaan noqdo atariisho sanado badan.
Ku dhashay Ota Ward.Atariisho ka tirsan Production Jinrikisha.Ka soo muuqanaya filimada "Instant Swamp" (2005), "Qoolleydu Si La Yaab Leh Ayay U Degdegaan" (2005), "Cayayaanka Aan Ku Qorneyn Buugga Sawirka" (2007), "Achilles and the Turtles" (2008), "Nekonin" (2017) ) Iyo qaar kaloo badan.
Saburo Ota (oo badanaa loo yaqaan awoowe)
Wuxuu ahaan jiray dunida tiyaatarka.Wuxuu go'aansaday inuu matalo tuug si uu u fuliyo riyadiisa xaaskiisa oo geeriyootay
Waxaa loo qabtay sidii shaqo nololeed ragii mushahar qaadaha ahaa oo ku badalay ragii hal nin ahaa iyo rakugo heer sare ah oo casri ah.Wakiilka wuxuu shaqeeyaa: Filimmada "Carruurtu Soo Noqdaan", "Ninkeyga", "Mt. Tsurugidake", TV "Sansu Baare Dambiyeed", "Naoki Hanzawa", iwm.
Tamatsutsumi Agaasime laga shakiyo oo aan dhedig iyo lacag midna aan ahayn.
Ka dib markii uu u shaqeeyay sidii rakugoka qaabka Tachikawa, wuxuu ku biiray ciidanka Takeshi.Intaa waxaa dheer inuu yahay karti iyo jilaa, waa qoraaga qoraaga filimka "Ismiidaaminta Buska" iyo agaasimaha iyo qoraaga filimka "Shichinin no Tomura". Wuxuu qoray sheeko sanadkii 2012.Isagu waa qoraaga "Pavlov's Man".
Agaasimaha: Daisuke Miki
Wakiilka Wakiilka Shirkada Movie Impact Co., Ltd.Filimku wuxuu ka shaqeeyaa "Ilmada Cyclops", "Mine", "Yokogawa Suspense", iwm ayaa lagu sii daayaa tiyaatarada.Wuxuu soo saaraa sawirro aan ku xirnayn nooc, sida agaasimayaasha filimada, agaasimayaasha barnaamijka TV-ga, iyo agaasimayaasha ganacsiga.
Filimka "Waxaan helay masraxa weyn!" Hadda waxaa laga heli karaa YouTube!
Ka soo gal YouTube taleefankaaga casriga ah, kaniiniga, ama qalab kale!
Dabcan waad ku raaxeysan kartaa bilaash.
YouTube "Waxaan helay marxaladda weyn! (Nooca 4K)" (96 daqiiqo)
YouTube "Waxaan helay marxaladdii weyneyd! (Trailer)"
Halkan u guji goobta gaarka ah ee filimka "Waxaan helay masraxa weyn!" !!